LA OGAADAY: Riyada Cristiano Ronaldo Ee Ah Keenista Jose Mourinho Ee Juventus Oo Burburaysa & Sababta Kaliya Ee Caqabada Ku Ah Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Weeraryahanka kooxa Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la soo sheegay inuu doonayo in kooxdiisa Juventus ay tababaraha xiga ee kooxdeeda u magacawdo Jose Mourinho balse qorshahaas ayaa ah mi burburi kara.
Juventus oo xilli ciyaareedkan rajo weyn ka qabtay hanashada Champions League kaddib imaatinkii Cristiano Ronaldo ayay markale riyadaas ka burburisay kooxda ree Holland ee Ajax oo tartanka kaga saartay wareegii 8-da.
Haddaba, Iyadoo uu haatan meesha ka baxay tababare Maxi Allegri sababta ugu weyn ee loo fasaxayna ay tahay horumar la’aanta Champions League ayuu Jose ugu cad cadaa macalimiinta shaqada Juve la wareegi kara.
Kanaalka Sky Sports ayaa haatan sheegay sababta kaliya ee u diidaysa Juventus saxeexa Mourinho in ay tahay inaysan awoodin inay heshiis la gaadho tababarahan maadaama oo aysan ka bixi karin qarashaadka ku baxaya heshiiskiisa.
Mourinho ayaa hore Ronaldo ugu soo maamulay kooxda Real Madrid iyaga oo si wadajir ah ugu soo guuleystay horyaalka La Liga iyo tartanka Copa Del Rey walow wakhtiyada qaar xidhiidhkoodu ahaa mid xun.
Sababta ugu weyn ee uu Ronaldo haatan madaxda Juventus ugu sheegay inay isku dayaan saxeexa Jose Mourinho ayaa ah inuu ku sifaynayo tababarahan guuleyste guushiisu joogto tahay.
Mourinho oo hore ugu soo guuleystay Champions League laba jeer ayaa ah shaqsi ka caawinkara Bianconeri inay hanato tartankaas markii ugu horreysay mudo sanado badan kaddib ah.
Dhinaca kale, Juve ayaa haddiiba ay awoodi waydo saxeexa Special One u leexan karta tababarayaal kale oo u badan horyaalka Premier League sida Jurgen Klopp, Maurizio Sarri iyo Mauricio Pochettino.